Thwebula PrivalSystems 77.01 – Vessoft
Ukukhulumisana Voice, Ewebhu
PrivalSystems – a isofthiwe igxile zokuxhumana ephephile internet. Isofthiwe ikuvumela ukuba afeze izwi namakholi wevidiyo, exchange imiyalezo yombhalo, thumela amafayela zombhalo, njll PrivalSystems isebenzisa i zombhalo inethiwekhi protocol ukuze kuvikeleke onokwethenjelwa ukudluliswa ulwazi. Isofthiwe amathuluzi anhlobonhlobo kanye izici lokuxhumana lula nabanye abasebenzisi. PrivalSystems inikeza ematfuba sakugcina siqu data ukuvuza ngokugcina umlando izincwadi ngqo amaklayenti ngenxa yokungabi bikho ukuhlonza umsebenzisi inombolo yefoni.
Voice kanye nokukhulumisana video
ifayela ukubethela Previous ngaphambi kokudlulisa
Isivikelo idatha ukucabhela in inethiwekhi
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela yokuxhumana namanye amaklayenti on jikelele zokuxhumana amaphrothokholi
Amazwana on PrivalSystems:
PrivalSystems Ahlobene software:
English, Español, 中文, 日本語... Viber 6.5.4.474
English, Русский, فارسی, Magyar... ooVoo 3.6.9.10
English, Français, Español, Deutsch... BlueStacks App Player 2.5.83.6332